I-Sunset Cove Lakehouse Steep Rock, MB
Hilbre, Manitoba, i-Canada
Nethezeka nomndeni wonke kulesi sikwele esingu-1800 foot foot, 4 bedroom bedfront cottage! Uma ukushona kwelanga okumangalisayo, izibani zasenyakatho ezingaphambili kolwandle, i-kayaking, ukubhukuda, ukudoba, ukuqwala izintaba, ikhofi lasekuseni nokulalela amagagasi kuyinto yakho…khona ke lena indawo yakho! Ukudoba eqhweni, izindlela zokushibilika eqhweni ezilungisiwe kanye nemizila yokushushuluza enqamula izwe, indawo yokushibilika eqhweni enkwalini, kanye ne-crocacurl kuyimisebenzi yasebusika ejabulisayo! ❄️ Ehlobo: ama-kayak angu-2 namabhayisikili angu-2 okusetshenziswa izivakashi.
Izindlu ezi-2 ezinezitezi ezi-2 ezihlukaniselwe ogwini ezisogwini lweLake Manitoba, indlu yangasese yangasese, ukushona kwelanga kwangasese kanye ne-showstopper. Amawa e-Steep Rock & amahle, amanzi ahlanzekile aluhlaza/ aluhlaza enza izithombe ezinhle kakhulu nokwenza izinkumbulo. Unyaka wonke ukuzijabulisa nokuzidela kulindelwe! Izingwenya eziqhakaza entwasahlobo ziyamangalisa!
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosofa, 1 usofa
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosofa, 2 osofa
Bonisa wonke amasevisi angu- 72
Eduze kolwandle olunesihlabathi e-Steep Rock beach park campground kanye nedrayivu emfushane eya emaweni aseSteep Rock Manitoba kanye nekwali. Sinama-kayak angu-2 esizeni namabhayisikili angu-2 kodwa sicela uphathe amajakhethi akho okuphila nezigqoko zamabhayisikili ezikulingana nawe! Kunesitolo esincane, indawo yokudlela nezakhiwo zokudlala ezitholakala ehlobo endaweni yokukhempa eseduze. Igrosa, isitolo sezingxenyekazi zekhompiyutha kanye negalaji likaphethiloli ukuhamba imizuzu engama-20.
Itholakala nge-imeyili, umbhalo noma amakholi wefoni. Kwesinye isikhathi sikwenye indawo yethu ezansi nomgwaqo. Uma unemibuzo noma izinkathazo, ngicela ungithinte mathupha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hilbre namaphethelo